Tupu Ị Malite | Outboard Boat Motor Mmezi
Tupu ịmalite, ị nwere ike ịchọrọ ịgụ ụfọdụ na akụkọ ihe mere eme nke Evinrude na Johnson Outboards. Achọpụtara m isiokwu ndị a na-adọrọ mmasị, karịsịa akụkọ gbasara Oli Evinrude bụ onye kere otu ụlọ ọrụ dum na 100 afọ gara aga. Ịghọta Oli Evinrude na ọrụ ya na-emepụta ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri abụọ ga-enye gị nnukwu ekele maka mmalite nke ndị a. Otu n'ime isiokwu ndị dị n'okpuru ebe a na-akọwa otú Oli Evinrude si gbalịa ụzọ mbụ ya nke ụgbọala mpempe akwụkwọ na 1909 na osimiri dị na Milwaukee. M na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla e mere akụkọ ihe mere eme na ebe ahụ maọbụ ọ bụrụ na onye ọ bụla achọpụtala afọ 100 nke akụkọ ihe mere eme dị otú ahụ. Enwere m ezinụlọ dị na Milwaukee, ị nwere ike ịchọta na otu n'ime ụbọchị ndị a, m ga-ewere obere ụgbọ mmiri na mpi kacha ochie m nwere ma chọpụta ebe ahụ ka m nwee ike ịkwanye ebe m na-ekwu na m nọ ebe ahụ. M na-eme atụmatụ ịmatakwu ihe banyere akụkọ banyere ụgbọ ala ụgbọ mmiri. Ụfọdụ ụmụnna nọ na Terre Haute Indiana malitere usoro Johnson Motor Corporation. Nke a bụ nanị 60 kilomita site n'ebe m bi! Oli Evinrude nwere nwa nwoke, Ralph Evinrude, onye nwekwara aka na mmepe na ule nke ụgbọ ala ụgbọ mmiri. Ralph Evinrude jikọtara na Johnson na 1936 iji mepụta Outboard Motor Corporation nke a maara taa dị ka OMC. Karl Kiekhafer malitere na Mercury Marine na 1940, ụlọ ọrụ ahụ ka na-agawanye ike taa. Mercury bụkwa maka ọtụtụ n'ime ọganihu ndị a na-aga n'ihu na ụgbọ ala ụgbọ mmiri abụọ.
Adanlodu Ole EVINRUDE (1877-1934)
Karl Kiekhaefer, onye nchoputa Mercury Marine Company History
Tupu ị malite, ị ga-achọpụta kpọmkwem ihe ị nwere. Ị ga-achọ ịma afọ ahụ, ihe nlereanya na nọmba ntinye nke moto gị iji nwee ike ịzụta akụkụ ziri ezi ma ghara ịlaghachi ha maka nkwụghachi. Onye na-ere ahịa nke ọma agaghị achọ ire gị ihe ọ bụla maka moto gị ọ gwụla ma ha maara ihe ị nwere. Ịchọpụta na ihe nlereanya na afọ dị anaghị arụ ọrụ. Ọ bụ ihe mgbagwoju anya na ọ dị mfe iji chefuo afọ nke ụgbọ mmiri gị. Ọ bụrụ na ịnweta ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ochie, ọ ga-abụ na ị maghị afọ ma jiri ya mee ihe. Nọmba nlereanya na-abụkarị na mkpịsị metal nke dị n'akụkụ aka ekpe nke mpaghara ala. Enwere weebụsaịtị ị nwere ike ịga ma mụta otu esi enweta ihe ọmụma site na nọmba nlereanya dịka afọ ahụ, ma ọ bụ eletriki ma ọ bụ eriri ụdọ, mkpụmkpụ ma ọ bụ ogologo oge, na ikekwe ihe ndị ọzọ dịka ma moto sitere na US ma ọ bụ Canada. Ọzọkwa, agba agba nke moto ahụ ga-enyere gị aka ikpebi afọ ahụ. Ozugbo ịchọtara ụgbọ ala gị, ị ga-enwe ike icheta ole na ole afọ e mepụtara otu moto ahụ kpọmkwem. Nke a ga-enye aka ma a bịa n'ịchọta akụkụ n'ihi na akụkụ nke ndị ọzọ na-ebugharị pụkwara ịrụ ọrụ na moto gị. M mụtara ọtụtụ ihe site n'ịchọgharị e-Bay maka yiri Motors na-agụ ihe na-ere nwere ikwu banyere ha. The a bụkwa ihe ọma ụzọ iji nweta ihe echiche nke ihe ha dị oké ọnụ ahịa. Dị ka ị na-amalite igwu site e-Bay, Ị nwere ike ịmalite ịhụ akụkụ ụfọdụ nke ga-dabara gị moto a na-awa na a ọma price.
Archive nke OMC ochie nlereanya-afọ website
Achọtara m na ọ na-enye aka ịnweta akwụkwọ ụfọdụ na isiokwu nke ịnọgide na-ejide motors. Ọ na-enye aka ịgụ banyere otu ụzọ ụgbọ mmiri abụọ si arụ ọrụ ụgbọ mmiri. Ka m na-agụ ma ghọta ya, otú ahụ ka m na-enwe ekele maka otú igwe ndị a si dị mfe. Gaa na ọbá akwụkwọ gị ma lee anya na mpaghara ntụaka ebe ị ga-achọta akwụkwọ ntuziaka na akwụkwọ mmezi ọkpụkpọ. Akwụkwọ ntuziaka nke na-ekpuchi igwe gị kpọmkwem bụ mgbe niile aka.
Ị ga-achọ ịchọta ezigbo ego. Achọpụtara m na ihe nkedo NAPA nke ụlọ ahịa na-adọba ụgbọala na-enye ndị ahịa mmiri mmiri na mberede, ha nwere otutu akụkụ m chọrọ na ngwaahịa na ebe nkesa. Akuku ụlọ ahịa ndị ọzọ na-ere ahịa CarQuest nwere "Sierra Marine Parts Catalog" nke bụ otu ihe na otu nọmba nọmba ndị ọrụ NAPA. Ịchọta akụkụ ndị dị mkpa bụ ihe ịma aka. Ozugbo m matara ihe dị m mkpa, NAPA nwetara ọsọ ọsọ. Ịchọrọ ịchọta ezigbo ndị na-ere ahịa ụgbọ mmiri OMC. Enweghị m mmasị ịzụta ihe dị na onye na-ere ụgbọ mmiri ma kwụọ ụgwọ ụlọ ahịa ha dị elu, mana enwere ụfọdụ ihe ị ga-enweta ebe ahụ. E nwere ọtụtụ ebe na weebụ ebe ị nwere ike ịzụta maka akụkụ mmiri. Ị ghaghị ijide n'aka na ị maara na ihe ị na-azụ bụ n'ezie ihe dị gị mkpa maka mpụta ụgbọ ala gị. Nsogbu ndị a na ndị ahịa a bụ na ha na-eche ihu na ị na-erere akụkụ maka ọtụtụ igwe. Na oru m, enwere m njikọ na Amazon.com ebe ị nwere ike ịzụta akụkụ ụfọdụ m ji. Ịzụta site na Amazon na-enyere aka iji kwado saịtị a ma kwadoo ọrụ ndị ọzọ. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ileba anya n'akwụkwọ ndekọ ekwentị ma hụ ma ọ bụrụ na e nwere ụgbọ mmiri salve ụgbọ dị nso gị. Achọtara m otu na mpaghara ndịda nke Indianapolis bụ nke dị mkpụmkpụ nke m na-adị ma na-enwe mmasị ịga ebe ahụ iji lee anya.
Enwere ọtụtụ ezigbo mkparịta ụka ebe ndị ọkachamara nwere ike ịza ajụjụ maka ime-onwe-gị na-edozi ndị mmadụ nanị n'ihi na ha chọrọ inye aka. Otu saịtị na-amasị m http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi Enwere m ọtụtụ ihe site n'ịgụ ajụjụ site n'aka ndị dị ka m bụ ndị chọrọ idozi ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ochie ha. O juru m anya na di na nwunye mbụ m tinyere ajụjụ ma nweta azịza ọma n'ime nkeji ole na ole, n'abalị. Ụfọdụ n'ime ụmụ okorobịa ndị a na-ekwurịta okwu bụ ndị mmiri na-ahụ maka mmiri na ọtụtụ afọ. O yiri ka ha na-achọ inyere ụmụ okorobịa aka ka m site n'inye azịza na ndụmọdụ. Dị ka ihe ọ bụla dị ndụ, ị nwere ike ịnwe ndị dị iche iche na-enye ngwọta dị iche iche.
Ọ na-enye aka ịchọta ịchọta onye ọrụ mpaghara ma ọ bụ enyi nwere ahụmahụ nke ga-adị njikere ịgbagha gị ma ọ bụrụ na ị banye n'ime ihe dị n'isi gị. N'okwu m, Enwere m enyi na-eji ụlọ ahịa LawnBoy. Ọ na-arụ ọrụ n'otu ụgbọ mmiri n'oge ọ bụ nwata, ọ ghaghịkwa ịrụzi ọtụtụ motors. E nwere ọtụtụ aghụghọ ndị a pụrụ iji mee ka ọrụ nke ịmegharị ọkụkụ ndị a dị mfe. Ị gaghị achọta ọtụtụ n'ime aghụghọ ndị a na ntuziaka ọrụ n'ihi na ha nwere ike ọ gaghị abụ akwụkwọ ọgụgụ ngwọta.
Kwadebe ebe dị mma iji rụọ ọrụ ahụ. N'okwu m, Enwere m ụgbọala na ngwá ọrụ ndị bụ isi. Ejiri m bọmbụ na ụfọdụ $ 5.00 sawhorse brackets na di na nwunye 2x4 si. Ejiri m ụgbọala m buru ibu ma nwee ogologo ụkwụ ogologo ka m wee kpoo m ụgbọ mpempe ya na ebe dị elu. Mgbe m na-arụ ọrụ n'ime ụlọ m, ọ na-amasị m ịmepụta tebụl mpempe akwụkwọ maka ịtọpụ akụkụ na ngwaọrụ ma rarafee tebụl ahụ n'elu ọrụ m ruo mgbe agwụchara ya. Enwere m ike ịnwe ọrụ ndị ọzọ na tebụl ndị ọzọ na-aga n'ihu, ma anaghị m achọ ka m rụọ ọrụ m.
Emela ngwa ngwa. Olileanya, ị na-eme nke a maka obi ụtọ na afọ ojuju gị. Maka m, nke a bụ ọrụ oyi nke m na-atụ anya na m ga-ewepụ m n'ụlọ, na TV, na ịkụgharị maka ọtụtụ izu na mgbede. Ọ bụrụ na m ruo n'ókè ebe m chọrọ akụkụ, m ga - akwụsị, ma eleghị anya, rụọ ọrụ nhicha, ma gaa ma nweta akụkụ m chọrọ tupu ị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na m ga-arụ ọrụ na motọ na ụdị mmepụta ọ bụla, ma ọ bụ maka onye ahịa, anaghị m eche na m ga-enwe mmasị na ya ma ọlị. Ebe ọ bụ na m na-eme nke a maka afọ ojuju na afọ ojuju m, m na-eche na ị na-arụ ọrụ na motọ a ka ọ bụrụ ihe ntụrụndụ, m ga-ewe oge niile m chọrọ ịrụ ọrụ ahụ.
Biko PỊA EBE A na-anọgide na anyị Projects Page.